काठमाडौँमा दैनिक दुई करोडको मःम बिक्छ « Khasokhas Follow @khasokhasmag
काठमाडौँमा दैनिक दुई करोडको मःम बिक्छ
ठेलादेखि पाँचतारेसम्म, सर्वसाधारणदेखि भिआइपीसम्म । सहरी क्षेत्रमा खाजाको पहिलो रोजाइमा मःमकै राज छ । तिब्बतबाट नेपालमा भित्रिएको यो परिकारले मेनुमा कब्जा जमाएसँगै राजधानीमा मःमको दैनिक करोडौँको कारोबार हुन थालेको छ ।
नेपालमा मःम यसरी भित्रियो
करिब ६० वर्षअघि नेपालमा मःम भित्रिएको हो । उपत्यकाका नेवार समुदायका व्यापारीहरू व्यापारको सिलसिलामा तिब्बत जाने क्रममा मःम काठमाडौंमा भित्रिएको हो । जाडोयाममा चीनको तिब्बतस्थित ल्हासामा अत्यधिक चिसो हुने भएपछि नेपालका नेवारी समुदायका व्यापारी ८ महिना ल्हासा र चार महिना नेपाल बस्थे । यसरी लामो समय तिब्बतमा बस्दा उनीहरू मःमको पारखी बनी नेपालमा पनि भि-याएका हुन् । त्यही मःम अहिले विभिन्न स्वाद र प्रकारमा बन्न थालेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डतर्फ नेपाली मःम
चीनमा बन्ने मःमको आकार नेपालमा पाइनेभन्दा ठूलो हुन्छ । नेपालमा भने यहा“का व्यापारीहरूले आफ्नै शैलीमा ढालेर मःमलाई सर्वप्रिय बनाउँदै लगे । तिब्बती खान्की मोहमोःलाई नेपाल भित्रिएपछि मःम भन्न थार्लिएको जानकारहरू बताउँछन् । तिब्बतमा लाम्चो आकारको मःम पाइन्छ भने नेपालमा लाम्चो तथा डल्लो मःम बन्ने गरेको छ ।
नेपालमा नेवारी समुदायका व्यापारीले त्यसवेला लाम्चो आकारको मःमबाट डल्लो बनाएर त्यसलाई आफ्नै नाम दिए । डल्लो आकारको मःमलाई नेवारी भाषामा मःमचा भनिन्छ । चा अर्थात् स्थानीय भन्ने हो । तिब्बतमा पाइने मःममा नुन र प्याजको प्रयोग हुन्छ भने नेपालमा भित्रिएपछि मःममा नेपाली मसला, प्याजका साथै अचार प्रयोग गर्न थालियो । जसले नेपाली मःमको मौलिक पहिचान बन्यो । नेपाली स्वादको मःम अहिले विश्वव्यापी बन्दै गएको छ ।
मःमको व्यावसायिक कारोबार सुरुवात
तिब्बतबाट मःम बनाउन सिकेर स्वदेश फर्केका नेपाली व्यापारीले आफ्नै घरमा आउने आफन्त, पाहुनालाई खुवाउन नयाँ परिकारका रूपमा यसलाई अघि सारे । त्यसवेला शनिबार वा फुर्सदको समयमा काठमाडौंका बासिन्दाले घरमै मःम पकाएर खाने गर्थे । ०२० पछि भने मःम व्यावसायिक रूपमा अघि बढेको बताउँछन् नाङ्लो रेस्टुरेन्टका सञ्चालक श्यामसुन्दर कक्षपती । उनका अनुसार नेवारी समुदायमा लोकप्रिय हुँदै गएपछि व्यवसायीले ललितपुरको पाटनका गल्लीमा रेस्टुरेटहरूमा मःम बनाएर बिक्री गर्न थालेका हुन् । त्यसवेला मानिस लुकीलुकी मःम खाने गरेको उनी बताउँछन् । सुरुसुरुमा बफ मःम मात्रै बन्ने गथ्र्यो ।
नाङ्लोले भित्र्याएको चिकेन मःम
चेन रेस्टुरा नाङ्लोले २५ वर्षअघि नेपालमा चिकेन मःमको सुरुवात गरेको हो । नाङ्लोका सञ्चालक कक्षपतीले बेकरी क्याफे खोलेर चिकेन मःमको सुरुवात गरे । चिकेन मःमप्रति ग्राहक लोभिन थालेपछि होटेल, रेस्टुरेन्टमा पनि यसको माग र व्यापार बढ्न थाल्यो । काठमाडौंको गल्लीबाट सुरुवात भएको मःम व्यवसाय अहिले सडकमा ठेलागाडादेखि संसारभरिकै रेस्टुराँ र पाँचतारे होटेलसम्म पुगिसकेको छ ।
उपत्यकामा दैनिक काटमार कति ?
पशुसेवा विभागको केन्द्रीय भेडाबाख्रा प्रवद्र्धन कार्यालयका पशु विकास अधिकृत देवी मजाकोटीका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक चार सय २० वटाजति राँगाभैँसी काटिन्छ । त्यस्तै दैनिक दुई हजार ६ सय बढी खसीबोका र २३ हजार कुखुरा काटिन्छ । उनका अनुसार बंगुरको यकिन तथ्यांक भने राखिएको छैन । यद्यपि दैनिक कम्तीमा एक ट्रक बंगुर भित्रिने गरेको छ । जसअनुसार काठमाडौंमा दैनिक २५ वटाभन्दा बढी बंगुर काटिन्छ ।
मःम का लागि कति मासु ?
सडकदेखि तारे होटेलहरूसम्म मःमको कारोबार हुने भएकाले मःमकै लागि प्रयोग हुने मासु कति भन्ने तथ्यांक कुनै निकायसँग छैन । मःमका लागि सानो पसलबाट पनि धेरै मासु बिक्री हुन्छ । काठमाडौंका रेस्टुरेन्ट तथा होटेलदेखि ठेलागाडामा समेत मःम मात्र परिकार नबन्ने भएकाले कति मासु मःमकै लागि प्रयोग हुन्छ भन्ने तथ्यांक नभएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
अनौपचारिक स्रोतका अनुसार उपत्यकामा काटिने राँगाभैँसीको मासुमध्ये करिब ३० प्रतिशत मासु बफ मःमका लागि प्रयोग हुन्छ । चिकेन मःमका लागि भने उपत्यकामा काटिने कुखुराको मासुमध्ये करिब सात प्रतिशत मासु मात्र प्रयोग हुन्छ । त्यस्तै मटन मःमका लागि काटिने खसीबोकाको मासुमध्ये करिब ३ प्रतिशत र पोर्क मःमका लागि काटिने बंगुरको मासुमध्ये एक प्रतिशतभन्दा कम मासु प्रयोग हुन्छ ।
काठमाडौंमा दैनिक दुई करोडको मःम बिक्छ
फास्टफुड व्यवसायमा मःम सर्वाधिक लोकप्रिय छ । स्वादिलो र भोक मेट्ने भएकाले मःम खाजाका रूपमा धेरैका लागि पहिलो रोजाइमा पर्ने गरेको छ । नेपालीले पैसा, स्वाद र सन्तुष्टिका हिसाबले पनि अन्य खाजाभन्दा मःमलाई नै प्राथमिकता दिने गरेका छन् । काठमाडौंका पाँचतारे होटेलदेखि सडकको छेउमा ठेलागाडामा समेत मःम नै ग्राहकहरूले खाजामा धेरै रोज्ने गरेका छन् ।
मःम एक प्लेटको ६० रुपैयाँदेखि तीन सय रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुने गरेको छ । ठेलागाडादेखि सामान्य होटेल तथा खाजाघरहरूमा मःम प्रतिप्लेट ६० देखि एक सय रुपैयाँमा पाइए पनि रेस्टुरेन्ट तथा ठूला होटेलहरूमा त्योभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री हुन्छ । नेपालमा दैनिक रूपमा कति मःम बिक्री हुन्छ र कति होटेल तथा रेस्टुरेन्टहरूबाट मःम बिक्री हुन्छ भन्ने आधिकारिक तथ्यांक छैन ।
व्यवसायीको अनुमानअनुसार काठमाडाैँ उपत्यकामा मात्र दैनिक दुई करोड रुपैयाँको मःम बिक्री हुन्छ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी बफ मःमकै कारोबार हुन्छ । बफपछि भेज, चिकेन, पनिर, मटन मःमको बिक्री बढी हुने गरेको छ । तुलनात्मक रूपमा भेज र चिकेन मःम करिब बराबरजस्तो बिक्री हुने गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
पाँचतारे होटेलमा मःमको कारोबार
काठमाडौंका पाँचतारे होटेलमा पनि मःमको व्यापार फस्टाउँदै गएको छ । ठूला होटेलहरूले मःम प्रतिप्लेट हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन् । केही होटेलबाहेक सबै तारे होटेलको मेनुमा मःम राखिएकै हुन्छ ।
पहिलो रोजाइमा बफ मःम
अहिले नेपालमा बफ, चिकेन, मटन, भेज, पोर्क, पनिर, बनाना मःमहरू बन्ने गरेको छ । तर, बफ मःमकै स्वादलाई सर्वसाधारणले धेरै रुचाउने गरेका छन् । राँगाभैँसीको मासु राखेर बनाइने मःम नै दैनिक रूपमा अरू मःमभन्दा बढी बिक्री हुने गरेको मःम पसल सञ्चालकहरू बताउँछन् ।
चार दशकअघिदेखि सञ्चालनमा रहेका विभिन्न मःम पसलले अहिलेसम्म पनि बफ मःम मात्रै बिक्री गर्दै आएका छन् । एभरेष्ट मःम कमलपोखरी, फाइभस्टार मःम वसन्तपुरजस्ता दशकौँदेखि चल्दै आएका मःम पसलले अहिलेसम्म बफ मःम मात्रै बनाउने गरेका छन् । नेपालमा घुम्न आएका पर्यटकले पनि बफ मःमदेखि मःमका अन्य परिकार पनि मन पराउने गरेका छन् । ६० प्रतिशत विदेशी पर्यटकको मन मःमले जित्ने गरेको होटेल तथा रेस्टुराँ व्यवसायीको दाबी छ ।
उतिवेला एक रुपैयाँमा १२ वटा मःम पाइन्थ्यो
फाइभस्टार मःम बोसोरहित हुने भएकाले लोकप्रिय छ । यसका सञ्चालक राजेन्द्र तुलाधरले सुरु–सुरुमा सालको पातबाट गाँसिएको टपरीमा मःम राखेर ग्राहकलाई दिन्थे । उनले मःमको व्यापार सुरु गर्दा एक रुपैयाँको १२ वटा मःम दिइन्थ्यो । करिब ५० वर्षअघि प्रतिप्लेट एक रुपैयाँबाट सुरु भएको तुलाधरको फाइभस्टार मःममा अहिले ग्राहकहरूको घुइँचो लाग्छ । अहिले उनी बफ मःम प्रतिप्लेट ८० रुपैयाँमा बिक्री गर्छन् ।
स्वास्थ्यका लागि कत्तिको लाभदायक ?
लोकप्रिय भए पनि स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले भने मःम त्यति हितकर नभएको चिकित्सकहरू बताउँछन् । स्वस्थ तरिकाले बनाइएको र राम्रोसँग पकाइएको मःमले स्वास्थ्यलाई असर गर्दैन । मैदाको पिठोमा रेसादार तत्व केही नहुने भएकाले स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुँदैन । भोक मेटाउनका लागि मात्र मैदाको पिठोबाट बनेको मःम खान सकिन्छ । मःमभित्र प्रयोग गरिने विभिन्न परिकार राम्रोसँग पाक्नु आवश्यक छ ।
जनस्वास्थ्य पोषणविद् डा. अरुणा उप्रेतीका अनुसार राम्रोसँग नपाकेको मःमभित्रको मासुमा जुकाको फुल हुने सम्भावना निकै हुन्छ । जसले गर्दा स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर पुग्न सक्छ । थोरै पैसाले पेट भरिने भएकाले यसलाई हिजोआज धेरै मानिसले दिनहुँ खाजाको रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
दिनहुँ मःम खाने गर्दा स्वास्थ्यमा नराम्रो असर पार्न सक्छ । मैदाबाट बनेको मःम खानाले कब्जियत, मोटोपना, ढाड दुख्ने, उच्च रक्तचाप, किड्नीमा हुने समस्याजस्ता रोग देखापर्न थाल्छन् । कोदो, फापरबाट बनेको मःमको परिकार स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले उपयुक्त हुने डा. उप्रेतीको सुझाब छ । मःमलाई दिनहुँजसो प्रयोग गर्नु राम्रो होइन । तर, कहिलेकाहीँ मात्र खाने हो भने कार्बोहाइड्रेड प्राप्त हुन्छ । मासु प्रयोग गरिएकोभन्दा भेज मःम स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुने चिकित्सकहरू सुझाउँछन् ।
यसकारण चले यी मःम पसल
नक्साल, कमलपोखरीस्थित एभरेष्ट मःमको प्रमुख विशेषता स्वाद हो । ग्राहकहरू एभरेष्ट मःममा प्रयोग गर्ने सुपलाई खुब मन पराउँछन् । यसका सञ्चालक डम्बर राईले ०४३ सालतिर प्रतिप्लेट तीन रुपैयाँका दरले मःम बिक्री गर्थे । बफ मःम मात्र पाइने एभरेष्ट मःममा अहिले उनी प्रतिप्लेट एक सय ३० रुपैयाँ लिन्छन् ।
त्यस्तै, कोटेश्वरको शिखर मःमको आकार ठूलो हुने भएकाले एकै प्लेटले भोक मेट्ने उद्देश्यले ग्राहकहरू त्यहाँ पुग्छन् । सुन्धारास्थित धरहरा मःम पसल टपरीका कारण चर्चित छ । जहाँ टपरीमा मःम दिइन्छ भने मःमको स्वाद पनि अत्यन्तै रुचाइएको छ । यीलगायत मःम पसलहरू कुनै न कुनै विशेषताले चलेका छन् । कतै स्वादिष्ट सुप, कतै स्वादिष्ट अचार त कतै बोसोरहित मःमका कारण मःम पसलहरू सफल बनेका छन् ।
होटेल सांग्रिला, लाजिम्पाट
यस होटेलमा बफ मःमबाहेक भेज, चिकेन र मटन पाइन्छ । दैनिक १५ देखि २० हजारसम्म मःमको कारोबार हुने गरेकोमा भेज मःमको नौ सय, चिकेन र मटन मःमको प्रतिप्लेट हजार लिने गरिन्छ ।
द्वारिकाज होटेल, बत्तीसपुतली
गौशाला, बत्तीसपुतलीमा रहेको द्वारिकाज होटेलमा पनि भेज तथा ननभेज मःम पाइन्छ । प्रतिप्लेट ६ सय रुपैयाँभन्दा बढी लिइने यस होटेलमा दैनिक १० हजारभन्दा बढीको मःम कारोबार हुन्छ । हरेक शुक्रबार यस होटेलले मःमको कारोबारबाट हजारौँ रुपैयाँ कमाउने गरेको छ ।
होटेल र्‍याडिसन, लाजिम्पाट
होटेल र्‍याडिसनमा पनि स्टिम, कोठे, फ्राइड, सी मःमको कारोबार राम्रो छ । यस होटेलमा चिकेन, भेज, पोर्कलगायतका मःमका परिकार पाइन्छ । जहाँ भेज मःम प्रतिप्लेट तीन सय ५० देखि ननभेज मःमको मूल्य प्रतिप्लेट ६ सय रुपैयाँसम्म पर्न जान्छ ।
लाजिम्पाटस्थित शंकर होटेलमा चिकेन र भेज गरी दुई परिकारका मःम पाइन्छन् । त्यहाँ दैनिक १५ देखि २० प्लेट मात्र मःमको व्यापार हुने गर्छ । त्यहाँ चिकेन मःमको प्रतिप्लेट तीन सय ७५ र भेज मःमको तीन सय १५ रुपैयाँ पर्ने गर्छ ।
होटेल तिब्बेत इन्टरनेसनल, बौद्ध
यस होटेलमा चिकेन, बफ, पोर्क, भेज, तिब्बेतियन, कोठे, स्टिम मःम पाइन्छ । दैनिक १० हजारभन्दा बढीको मःमको कारोबार हुने यस होटेलले सबै प्रकारका मःमको प्रतिप्लेट चार सय ३५ रुपैयाँ लिने गरेको छ ।नयाँ पत्रिका